खेलकुद – Page7– SidhaRekha
२०७३ कार्तिक ६, शनिबार १८:४०२०७३ कार्तिक ६, शनिबार १८:४०२०७३ कार्तिक ६, शनिबार १८:४० by Ghanshyam Sagar
बिडिसिए क्रिकेट कप : समुह बी का चार खेल सम्पन्न
विनोद सिंह विष्ट, बैतडी, ६ कात्तिक । बैतडीमा जारी बिडिसिए क्रिकेट प्रतियोगिता अन्र्तगत शनिवार पनि समुह बी का ४ ओटा खेल सम्पन्न भएका छन् । निङ्गलाशैनी खेल मैदान देहिमाण्डौंमा दुई र बुढाबाजे खेलमैदान रातामाटामा दुई गरी ४ खेल सम्पन्न भएका हुन । निङ्गलाशैनी खेल मैदान देहिमाण्डौंमा भएको पहिलो खेलमा महामाया क्रिकेट क्लबलाई ८ विकेटले पराजित गर्दै एनआरवाईसि विजयी भएको छ । टस जितेर ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको महामायाले जनक पुजाराको सर्वाधिक २७ तथा माधव भट्टको १० रनको मद्दतले १३ दशमलव ३ ओभरमा अलआउट हुदै ९३ रन बनाएको थियो । एनआरवाईसिका सुरज बोहराले ह्याट्रिकसंगै ६ विकेट हात पारेका थिए । ९४ रनको विजयी लक्ष्यका साथ मैदान उत्रेको एनआरवाईसिले नरेस चन्दको ३१ तथा सुरज बोहराको २५ रनको मद्दतले १२ दशमलव २ ओभरमा २ विकेटको क्षतीमा लक्ष्य भेट्टाएको थियो । यो दोस्रो हारसंगै महामाया प्रतियोगितावाट बाहिरिए
२०७३ कार्तिक ३, बुधबार १९:२०२०७३ कार्तिक ३, बुधबार १९:२०२०७३ कार्तिक ३, बुधबार १९:२० by Ghanshyam Sagar
बिडिसिए क्रिकेट कप : समुह ए का चार खेल सम्पन्न
विनोद सिंह विष्ट, बैतडी,३ कात्तिक । बैतडीमा जारी बिडीसीए क्रिकेट प्रतियोगिता अन्र्तगत बुधवार पनि समुह ए का ४ ओटा खेल सम्पन्न भएका छन । निङ्गलाशैनी खेल मैदान देहिमाण्डौंमा दुई र बुढाबाजे खेलमैदान रातामाटामा दुई गरी ४ खेल सम्पन्न भएका हुन । निङ्गलाशैनी खेल मैदान देहिमाण्डौंमा भएको पहिलो खेलमा निङ्गलाशैनी क्रिकेट क्लबले बाशुलिङ क्रिकेट क्लबलाई १०५ रनले पराजित गर्दै दोस्रो जित दर्ता गरेको छ । टस हारेर ब्याटिङ गर्ने निम्ता पाएको निङ्गलाशैनीले गजेन्द्र बोहराको सर्वाधिक ५४ रनको मद्दतले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेटको क्षतीमा २१६ रन बनाएको थियो । निङ्गलाशैनी सुबास बोहराले ४६ तथा खडक बोहराले २४ रन बनाएको थिए । बाशुलिङ क्रिकेट क्लबका दिपेन्द्र ऐरीले ४ विकेट हात पारेका थिए । २१७ रनको विजयी लक्ष्यका साथ मैदान उत्रेको बाशुलिङ १११ रनमात्र जोड्दा निङ्गलाशैनीको जीत सुनिस्चित भएको हो । बाशुलिङ क्
२०७३ कार्तिक २, मंगलवार २१:०५२०७३ कार्तिक २, मंगलवार २१:०५२०७३ कार्तिक २, मंगलवार २१:०५ by Ghanshyam Sagar
बिडिसिए उद्घाटन खेलमा निङ्गलाशैनी क्रिकेट क्लब विजयी
विनोद सिंह विष्ट, बैतडी, २ कात्तिक । जिल्ला क्रिकेट संघ बैतडीको आयोजनामा आजदेखि बिडिसिए क्रिकेट कप प्रतियोगिता १६ औ संस्करण सुरु भएको छ । निङ्गलाशैनी खेल मैदान देहिमाण्डौं र बुढाबाजे खेलमैदान दनपा ११ रातामाटामा सञ्चालन भईरहेको प्रतियोगितामा १६ टिमको सहभागिता रहेको छ । देहिमाण्डौमा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी किशोरकुमार चौधरीले ब्याटिङ र नेपाल क्रिकेट संघका केन्द्रिय सदस्य जयदेव जोशीले बलिङ गरेर उद्घाटन गरिएको हो । आज भएको उद्घाटन खेलमा निङ्गलाशैनी क्रिकेट क्लब एनसिसिले महारुद्र क्रिकेट क्लबलाई ३४ रनले पराजित गरेको छ । निङ्गलाशैनी खेल मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको निङ्गलाशैनीले खडक बोहराको उत्कृष्ठ प्रदर्सनले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेटको क्षतीमा १८६ रन बनाएको थियो । निङ्गलाशैनीका खडक बोहराले अर्धसतकिय पारी खेल्दै ३९ बलमा ९ चौका र १ छक्काको मद्दतले ५७ रन
२०७३ कार्तिक २, मंगलवार ०८:०९२०७३ कार्तिक २, मंगलवार ०८:०९२०७३ कार्तिक २, मंगलवार ०८:०९ by Ghanshyam Sagar
बिडिसिए क्रिकेट कप आजदेखि
विनोद सिंह विष्ट, बैतडी, २ कात्तिक । जिल्ला क्रिकेट संघ बैतडीको आयोजनामा आज मंगलवारदेखि बिडिसिए क्रिकेट कप प्रतियोगिता १६ औ संस्करण हुने भएको छ । निङ्गलासैनी खेल मैदान देहिमाण्डौं र बुढाबाजे खेलमैदान दनपा ११ रातामाटामा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा १६ टिमको सहभागिता रहेको बैतडी जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष रमेश बोहराले जानकारी दिनुभयो । प्रतियोगिताको सम्पुर्ण तयारी पुरा भईसकेको र मंगलवार देहिमाण्डौमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी किशोरकुमार चौधरीको प्रमुख आथित्यमा एक कार्यक्रमका विच उद्घाटन गरिने उहाले बताउनुभयो । कात्तिक ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिता टी २० फर्म्याटमा हुुनुका साथै प्रतियोगिता राउण्ड रोविन लिगको आधारमा खेलाइने जनाएको छ । प्रतियोगिताबाट उत्कृष्ठ खेलाडीबाट क्षेत्रिय प्रतियोगिताका लागी क्षेत्र नम्बर ६ बैतडीको टिम बनाईने बताईएको छ । प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले नगद २५
२०७३ कार्तिक १, सोमबार १९:२६२०७३ कार्तिक १, सोमबार १९:२६२०७३ कार्तिक १, सोमबार १९:२६ by Ghanshyam Sagar
बैतडीमा हुने बिडिसिए क्रिकेट कप मंगलबारदेखि
विनोद सिंह विष्ट, बैतडी, १ कात्तिक । जिल्ला क्रिकेट संघ बैतडीको आयोजनामा मंगलवारदेखि बिडिसिए क्रिकेट कप प्रतियोगिता १६ औ संस्करण हुने भएको छ । निङ्गलासैनी खेल मैदान देहिमाण्डौं र बुढाबाजे खेलमैदान दनपा ११ रातामाटामा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा १६ टिमको सहभागिता रहेको बैतडी जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष रमेश बोहराले जानकारी दिनुभयो । प्रतियोगिताको सम्पुर्ण तयारी पुरा भईसकेको र भोली मंगलवार देहिमाण्डौमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी किशोरकुमार चौधरीको प्रमुख आथित्यमा एक कार्यक्रमका विच उद्घाटन गरिने उहाले बताउनुभयो । कात्तिक ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिता टी २० फर्म्याटमा हुुनुका साथै प्रतियोगिता राउण्ड रोविन लिगको आधारमा खेलाइने जनाएको छ । प्रतियोगिताबाट उत्कृष्ठ खेलाडीबाट क्षेत्रिय प्रतियोगिताका लागी क्षेत्र नम्बर ६ बैतडीको टिम बनाईने बताईएको छ । प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले नगद २
२०७३ आश्विन २६, बुधबार १९:५३२०७३ आश्विन २६, बुधबार १९:५३२०७३ आश्विन २६, बुधबार १९:५३ by Ghanshyam Sagar
बेलौरीमा शुभ दिपावली स्वराजकप फुट्बल प्रतियोगिता हुने
हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, २६ असोज । बेलौरीमा शुभ दिपावली स्वराजकप फुट्बल प्रतियोगिता हुने भएको छ । गत विगतका वर्षहरू झैं यस वर्ष पनि यही कार्तिक ५ गते देखि फुटबल प्रतियोगिता हुने आयोजकले जनाएको छ । नगर खेलकुद विकास समिति बेलौरीले आयोजना गर्ने प्रतियोगितामा जेवी अटो मोबाइल्स धनगढीले मुख्य प्रायोजन गर्ने नगर खेलकुद विकास समिति बेलौरीका सचिव तेज बहादुर चन्दले बताउनु भयो । खेलकुदका लागि टिम दर्ता लगायतका कार्यहरू भोली असोज २७ गते देखि सुरु भई कात्र्तिक ४ गते सम्म जारी रहने र कार्तिक ५ गते विहान ११ बजेबाट खेल उद्घाटन र सञ्चालन हुने नगर खेलकुद विकास समिति बेलौरीले जनाइएको छ । यस वर्षको शुभ दिपावली स्वराजकप फुट्बल प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमलाई रु. ५५,५५५।– र द्वितीय हुने टिमलाई रु. २५,५५५।– पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
२०७३ आश्विन २२, शनिबार १८:५६२०७३ आश्विन २२, शनिबार १८:५६२०७३ आश्विन २२, शनिबार १८:५६ by Ghanshyam Sagar
गुरुखोलामा किक्रेट प्रतियोगिता
इन्द्रसरा खड्का, बैतडी, २२ असोज । बैतडीको गुरुखोलामा जारी किक्रेट प्रतियोगितामा आज पनि विभिन्न खेल भएका छन् । दशैको अवसरमा आयोजना गरीएको प्रतियोगीतामा आज पहिलो खेल डाडाबाग र बलब्रेकर बिच भएको थियो । पहिले टस जितेर ब्याटिङ गरेको डाडाबागले सबै विकेट गुमाएर ९७ रन मात्र बनाउन सक्यो डाडाबागले दिएको लक्ष्य बलब्रकरले ११ ओभरमा ९८ रन बनाइ बिजयी भएको थियो । यस्तै दोस्रो खेल एनएमसि र एनएमसि स्टार ब्वाइज बिच भएको थियो । जसमा पहिले टस जितेर ब्याटिङ गरेको एनएमसि स्टार ब्वाइजले सबै विकेट गुमाएर ८५ रनमात्र बनाउन सक्यो । जवाफमा एनएमसिले उक्त लक्ष ११ ओभरमा पुरा गरी फाइनलमा प्रबेश गरेको छ । यस्तै आजै भएको तेस्रो खेल भुमिराज र बलब्रेकर बिच भएको थियो । पहिले ब्याटिङ गरेको बलब्रेकरले १५ ओभरमा १ सय ४० रन बनाएको थियो । उक्त लक्षयलाइ पच्छयाउने क्रममा भुमिराजले सबै विकेट गुमाएर १ सय १४ रनमा समेटी
२०७३ आश्विन १७, सोमबार ०६:१४२०७३ आश्विन १७, सोमबार ०६:१४२०७३ आश्विन १७, सोमबार ०६:१४ by Ghanshyam Sagar
बडादशैंको अवसरमा भलिबल प्रतियोगिता र सांस्कृति कार्यक्रम हुने
भगीरथ अवस्थी, बैतडी, १७ असोज । बडादशैको अवसरमा बैतडीको रौलेश्वरमा भलिबल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक तथा सम्मान कार्यक्रम हुने भएको छ । पूर्व विद्यार्थी समाज रौलेश्वरको आयोजनामा यही असोज १८ गतेदेखि २० गते विविध सांस्कृति कार्यक्रम र भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने कार्यक्रम संयोजक रीजन मडैले जानकारी दिनुभयो । हिन्दू नेपालीहरुको महान चाड बडादशैैंको अवसर पारेर शुभकामना आदान प्रदानका लागि भलिबल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक र सम्मान कार्यक्रम राखिएको उहाँले बताउनुभयो । भलिबल प्रतियोगिता १८ र १९ गते सञ्चालन हुने छ भने २० गते सांस्कृतिक तथा सम्मान कार्यक्रम हुने आयोजकले जनाएको छ । रौलेश्वर मावि रामकी बरायलमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । भलिबल प्रतियोगिता समूह दर्ताको कार्य भइरहेको छ भने सांस्कृतिक कार्यक्रममा गायक जनक धानुक र गायिका पूर्णिमा ठगुन्नाको बिशे
२०७३ श्रावण २९, शनिबार ०८:४५२०७३ श्रावण २९, शनिबार ०८:४५२०७३ श्रावण २९, शनिबार ०८:४५ by Ghanshyam Sagar
सरस्वतीले २६ वर्ष पुरानो राष्ट्रिय कीर्तिमान तोडिन्, निशा ८ दिनपछि ओलम्पिक खेल्दै
धुर्ब बिष्ट, डडेल्धुरा, २९ साउन । डडेल्धुराकी सरस्वती भट्टराई रियो ओलम्पिकको पहिलो चरण हिटबाट बाहिरिएकी छन । रियो ओलम्पिक अन्तर्गत १५ सय मिटर मध्यम दूरीको दौडमा निर्धारित दूरी चार मिनेट ३३ दशमलव ९४ सेकेण्डमा पूरा गरिन । ४१ जना खेलाडी रहेको स्पर्धामा सरस्वती ३७ औं स्थानमा रहिन । हिट १ मा रहेकी सरस्वती यो समूहमा भने १३ औं स्थानमा रहिन । पहिलो चरणबाटै बाहिरिए पनि सरस्वतीले राष्ट्रिय कीर्तिमान भने बनाउन सफल भइन । आज बिहान भएको प्रतिस्पर्धामा उनले चार मिनेट ३३ दशमलव ९४ सेकेण्डको राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी हुन । उनले राजकुमारी पाण्डेको नाममा रहेको कीर्तिमान तोडेकी हुन । राजकुमारीले सन १९९० को एसियन गेम्समा ४ मिनेट ३४ दशमलव ४५ सेकेण्डको राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी थिइन । यस्तै सुदूरपश्चिमकै चेली निशा रावलले भने अबको आठ दिनपछि ओलम्पिक खेलमा सहभागिता जनाउँदै छिन । तेक्वान्दोकी
२०७३ असार २२, बुधबार १७:०४२०७३ असार २२, बुधबार १७:०४२०७३ असार २२, बुधबार १७:०४ by Ghanshyam Sagar
कर छलीको अभियोगमा मेसीलाई २१ महिना जेल सजाय
काठमाडौं, २२ असार । बार्सिलोनाका फुटबल खेलाडी लियोनल मेसीलाई कर छलीको अभियोगमा बुधबार स्पेनको एक अदालतले २१ महिना जेल सजाय सुनाएको छ । साथै उनलाई २४ करोड रुपैंया जरिवाना पनि तोकेको बिबिसीले जनाएको छ। -एजेन्सी